Wasaarada Maaliyada oo bilowday diiwaangelinta hab cusub oo ay ciidamada mushaarka lagu siinayo (Sawiro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasaarada Maaliyada oo bilowday diiwaangelinta hab cusub oo ay ciidamada mushaarka lagu siinayo (Sawiro)
30th November 2017 A warsame Af Soomaali 0
Wasiirka Maaliyadda Dowlada Federalka Cabdiraxmaan ducaale Beyle ayaa Maanta Daahfuray Diwaangalinta Ciidamada Xoogga Dalka oo markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya askari walbo mushaarkiisa uu ku qaadan doono AKOONKIISA gaarka ah.
Arintaan oo uu hormuud ka yahay Wasiir Beyleh ayaa ujeedkeedu waxa uu yahay in laga gudbo Nidaamka Lacagaha Kaashka ah gacanta loogu qeybiyo Ciidamada taasoo mudooyinkii lasoo dhaafay la isticmaalayay.
Wasiirka Maaliyadda Dr. C/raxmaan Ducaale ayaa tilmaamay haddii tilaabadan si rasmi ah loogu guuleysto in ay noqondoonto mid waxbadan ka badasha baahida Ciidanka ay u qabaan helida mishaar joogta ah.
Diiwaangalinta Ciidamada Xoogga Dalka ee Xisaabta shaqsiyadeed waxaa si gaar ah maanta loogu bilaabay Ciidamada Milatariga Guutada Madaxtooyada.
Ciidamada xoogga dalka ayaan mushaarkooda si toos ah u helin waxayna ciidamada helaan dhowrkii bilood mar hase yeeshee lama oga sida ay suurtogal u noqon doonta in askar ku jira furimaha ama meelaha ka fogfog magaalooyinka ay ugu qaadan karaan mushaarkooda akaawn bangi.
Diiwaangelinta ciidamada Madaxtooyada
Libya:Archbishop Tutu ,here are three Great Stains on humanity; War, Genocide and Slavery.